Imandarmedia.com.np: २ नम्बर प्रदेशमा चुनाव जित्न दलहरुले बनाए यस्तो अनौठो रणनीति !
Archive, Main News, Newspaper » २ नम्बर प्रदेशमा चुनाव जित्न दलहरुले बनाए यस्तो अनौठो रणनीति !
२ नम्बर प्रदेशमा चुनाव जित्न दलहरुले बनाए यस्तो अनौठो रणनीति !
असोज २ गते हुने प्रदेश २ को स्थानीय निर्वाचनलाई दलहरूले राजनीतिक अस्तित्वको लडाइँका रूपमा लिएका छन् ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्रै होइन, राजपाले समेत प्रदेश २ का आठ जिल्लामा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिरहेका छन् । चारवटै दलले धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटका एक सय ३६ स्थानीय तहमा जसरी पनि पहिलो बन्ने रणनीतिमा छन् ।
ती चारवटै दलले एक्लै लड्नेदेखि तालमेल गरेर चुनावमा होमिनेसम्मका नीति तय गरेका छन् । यो खबर चिरञ्जीवी ढुंगानाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
Trending : Archive, Main News, Newspaper